အချိန် အတိုတွင်း ကြည့်ရှု့ သူများ ခဲ့ ပြီး ပရိသတ်တွေကြား မှာ ရေပန်းစား ခဲ့တဲ့ ဖူးပွင့်သခင် ရဲ့ အမိုက် စား TIK TOK ဗီဒီယို – GaMone Media
Homepage / Celebrity / အချိန် အတိုတွင်း ကြည့်ရှု့ သူများ ခဲ့ ပြီး ပရိသတ်တွေကြား မှာ ရေပန်းစား ခဲ့တဲ့ ဖူးပွင့်သခင် ရဲ့ အမိုက် စား TIK TOK ဗီဒီယို
အချိန် အတိုတွင်း ကြည့်ရှု့ သူများ ခဲ့ ပြီး ပရိသတ်တွေကြား မှာ ရေပန်းစား ခဲ့တဲ့ ဖူးပွင့်သခင် ရဲ့ အမိုက် စား TIK TOK ဗီဒီယို
မင်းသမီးချောလေး ဖူးပွင့်သခင်ကတော့ အောင်မြင်နေတဲ့ အနုပညာရှင် တွေ ထဲမှာ တစ်ယောက် အပါအဝင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖူးပွင့်သခင်က ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေများစွာ ရိုက်ကူးပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို အပြည့်အဝရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း သူမက အနုပညာ အလုပ်တွေကို ဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်နေပြီး သရုပ်ဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လည်း ကြိုးစားနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖူးပွင့်သခင်က အရပ်အမောင်းလည်းကောင်းသလို ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ ပင်ကိုယ် အလှတရားတွေ ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ချစ်စရာကောင်းသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။လတ်တလော ကိုဗစ်ကာလလေးမှာလည်း ပရိသတ်တွေနဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်သွားအောင် အပျင်းအပြေ tik tok လေးတွေ ဆော့ကစားပြီး အမြဲဖော်ပြပေးပါတယ်။ ယခုမှာလည်း သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေ အတွက် ချစ်စရာ tik tok လေးကို တင်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။
ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာ တော့ ဖူးပွင့်သခင် က သီချင်းလေးအတိုင်း ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အမူအရာလေးတွေ နဲ့ အထာကျကျ ဆော့ကစားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အနက်ရောင်ကိုယ်ကျပ်ဝတ်စုံလေးကလည်း သူမရဲ့ ပင်ကိုယ်အလှတရားတွေ ကို ပေါ်လွင်ပြီး ရင်ခုန်စရာကောင်းနေခဲ့ ပါတယ်။ ကဲ…. ပရိသတ်တွေအတွက် မင်းသမီးချောလေး ဖူးပွင့်သခင် ရဲ့ အလန်းစား tik tok လေးကို ပြန်လည် ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။
မင္းသမီးေခ်ာေလး ဖူးပြင့္သခင္ကေတာ့ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ အႏုပညာရွင္ ေတြ ထဲမွာ တစ္ေယာက္ အပါအဝင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖူးပြင့္သခင္က ဗီဒီယိုဇာတ္ကားေတြမ်ားစြာ ႐ိုက္ကူးၿပီး ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ေတြကို အျပည့္အဝရရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာလည္း သူမက အႏုပညာ အလုပ္ေတြကို ဆက္တိုက္လုပ္ကိုင္ေနၿပီး သ႐ုပ္ေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဖူးပြင့္သခင္က အရပ္အေမာင္းလည္းေကာင္းသလို ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိတဲ့ ပင္ကိုယ္ အလွတရားေတြ ကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္းသူေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။လတ္တေလာ ကိုဗစ္ကာလေလးမွာလည္း ပရိသတ္ေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္မျပတ္သြားေအာင္ အပ်င္းအေျပ tik tok ေလးေတြ ေဆာ့ကစားၿပီး အၿမဲေဖာ္ျပေပးပါတယ္။ ယခုမွာလည္း သူမရဲ႕ ပရိသတ္ေတြ အတြက္ ခ်စ္စရာ tik tok ေလးကို တင္ေပးလာခဲ့ပါတယ္။
ဒီဗီဒီယိုေလးထဲမွာ ေတာ့ ဖူးပြင့္သခင္ က သီခ်င္းေလးအတိုင္း ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိတဲ့ အမူအရာေလးေတြ နဲ႔ အထာက်က် ေဆာ့ကစားထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အနက္ေရာင္ကိုယ္က်ပ္ဝတ္စုံေလးကလည္း သူမရဲ႕ ပင္ကိုယ္အလွတရားေတြ ကို ေပၚလြင္ၿပီး ရင္ခုန္စရာေကာင္းေနခဲ့ ပါတယ္။ ကဲ…. ပရိသတ္ေတြအတြက္ မင္းသမီးေခ်ာေလး ဖူးပြင့္သခင္ ရဲ႕ အလန္းစား tik tok ေလးကို ျပန္လည္ ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါတယ္။
Previous post စကပ် တိုတိုလေး နဲ့ စမက်ကျကျ မိမိုက် နေ တဲ့ မော်ဒယ်လ် ချိုဇင်ဝင်းပြည့်
Next post အတွင်းခံ နဲ့ ပုရိသတွေ ရင် တလှပ်လှပ် ဖြစ်သွားအောင် တင်သားကို လုပ်ပြလိုက်တဲ့ မျက်ဝန်း ရဲ့ အကြမ်းစား ဗီဒီယို